Layton: tuulada qarsoodiga ah, ee hadda loo heli karo iphone iyo ipad | Wararka IPhone
10 sano kadib markii loo sii daayay Nintendo DS, cinwaanka magaciisu u bixiyay taxanaha Layton ayaa hadda ku soo degay App Store. Iyadoo in ka badan 17 milyan oo unug laga iibiyay adduunka oo dhan, cinwaankani wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee taxanaha ah ee sidoo kale u adeegay inuu abuuro nooc cusub oo ka mid ah xiisaha halxiraalaha
Ciyaartan waxay ku saleysan tahay buugaagta "Atama no taisou", oo macno ahaan loo tarjumay macnaheedu yahay jimicsi maskaxda, oo ay qortay Akira Tago. Cinwaankan Professor Layton wuxuu wajihi doonaa in ka badan 100 xujooyin oo ay kujiraan xujooyin badan oo halxiraaleyaal ah oo ay tahay inaan kala jajabino, u dhaqaaqno walxaha iyo sidoo kale inaan si sax ah uga jawaabno su'aalo taxane ah oo taxane ah.
Astaamaha ugu muhiimsan ee Layton: Tuulada qarsoodiga ah
Qaybta koowaad ee taxanaha Layton. Ciyaaraha kale ee laga heli karo App Store waa sii socoshada midkaan asalka ah.
In ka badan xujooyinka 100 si loo xalliyo oo uu abuuray qoraaga buugaagta ay ciyaarta ku saleysan tahay, Akira Tago.
Waxa kale oo ku jira muuqaalo animated cusub oo aan laga helin noocyadii hore ee ciyaartan.
Ciyaarta si buuxda ayaa loogu qoondeeyay HD animations-ka ayaa dib loo abuuray si loo gaarsiiyo tayada laga filayo kulankaan.
Waxyaabaha yar yar ee balwadaha leh ee ay ka mid yihiin ururinta jajabka rinjiyeynta dahsoon, xanta iyo sidoo kale noo oggolaanshaha inaan la soconno jilayaasha labaad ee ciyaarta.
Uma baahnid qadka internetka si aad ugu raaxaysato ciyaartan.
Layton: Tuulada qarsoodiga ah waxay u baahan tahay macruufka 8 ama wixii ka sareeya, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon iPhone 4s iyo iPad 2 ama ka dib. Qiimaha kulankaan waa 10,99 euro iyo booska loo baahan yahay in lagu rakibo ciyaartan qalabkeena wuxuu gaarayaa 600 MB.
Layton: Tuulada Qarsoon HD9,99
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Layton: Tuulada qarsoodiga ah, oo hadda loo heli karo iPhone iyo iPad